Global Voices teny Malagasy » Politisiana Mahalala “Miasa Ho An’ireo Nifidy Azy” No Ezahan’ny Islandey Fidiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Oktobra 2016 3:23 GMT 1	 · Mpanoratra Guest Contributor Nandika Candy
Sokajy: Eoropa Andrefana, Islandy, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Ny Tetezana - The Bridge
Sasantsasany amin'ny zavanisy: Tsaroanareo ny krizy ara-bola tamin'ny 2008. Nandona an'i Islandy izay olana izay. Tena mafy ka an'aliny ireo nidina an'arabe nankany amin'ny Parlemanta nively vilany sy lapoaly (nantsoina hoe “Revolisionan'ny Vilany & Lapoaly ”), ary nitaky fiovàna.
Maherin'ny 500 ireo tonga. Dimy amby roapolo no voafidy. Ary mandritry ny efatra volana izy ireo no hiasa imasom-bahoaka hanao vakiraoka lalàm-panorenana iray vaovao— sy handefa ny dika avy amin-dry zareo ho hita amin'ny Facebook, sy handray ireo fanehoankevitra avy amin'izao tontolo izao. Avy eo ny Parlemanta hametraka ilay vakiraoka hofidiana (fifidianana tsy manery, fa fangatahana raha tokony hisy lalàm-panorenana iray vaovao “miainga avy amin'ny” vakiraokan'ny Filankevitra). Taona efatra lasa izay, mihoatra ny roa ampahatelon'ireo nifidy no nandany ilay vakiraoka. (Fandalinana iray mahafinaritra momba io dingana io ny Blueberry Soup .)
Saingy rehefa nipoaka ireo tantara ratsy avy amin'ny Taratasin'i Panamà , ary nametraka fialàna ny Praiminisitra , tsaroan'ny vahoaka tao Islandy fa nisy governemanta nilaina namboarina tao. Araka izany, nanomboka nivelatra tao Islandy ny hetsiky ny olom-pirenena, hanosehana ny hitondrana ilay olana ho eo anivon'ireny fifidianana ireny.
Andro vitsy lasa izay ry zareo no nanomboka fanentanana iray tao amin'ny media sosialy  mba hamehezana io fifidianana io ho amin'ity olana ity. Ny hafatra ao anatin'ilay fanentanana dia miendrika famerenana feno faharanitan-tsaina ilay zava-mahatsikaiky iray mahazatra : “Mba renareo [toy ny ao amin'ny Parlemanta] ve izahay [toy ny vahoaka] ankehitriny?” Lahatsary efatra (roa amin'ny teny anglisy ary roa amin'ny fitenin'ny Islandey) no mametraka ireo teny ho an'ny adihevitra, miampy ireo fifanakalozana 2 amin'ny 10 (amin'ny fiteny Islandey) miresaka ireo olana 10 faratampony hovahan'ilay lalàm-panorenana vaovao. Ireto ambany ireto ny dika amin'ny teny Anglisy.
Angatahan'ilay fanentanana ireo mpifidy — “na avy amin'ny havia na avy amin'ny havanana”—mba hifidy ho an'izay antoko manolo-tena “hanao izay haha-laharam-pahamehana ny hanamafisana ny lalàm-panorenana iray vaovao mifototra amin'ilay drafitra nataon'ny filankevitry ny lalàm-panorenana.” Hatreto, ireo antoko lehibe efatra avy amin'ny fanoherana no nanao izay fanolorantena izay — ny Antoko Pirate , Maitso Ankavia , Sosialy Demaokraty , ary ny antoko Hoavy Mamiratra . Betsaka ny vintana haha-maro an'isa ireo antoko efatra ireo ao amin'ny Parlemanta vaovao.
Raha vitan'io hetsika io ny mahazo fisandratana, hanana fahafahamanao matanjaka izy—ao Islandy sy manerana izao tontolo izao. Ny Icelandic Constitution Society  (izay manao ilay fanentanana) dia nampanantena ny handany ny vola nangonin-dry zareo tamin'ny famoriambahoaka tao Islandy ho amin'io raharaha io. Nefa izay ambiny voaangona ankoatra izay ilaina dia ho aleka ho any amin'izay asa momba ny demaokrasia amin'ny sehatra iraisampirenena.
Alaivo sary an-tsaina ny faritra mety ampiharana io fanentanana— Can You Hear Us — io amin'ireo demaokrasia manerantany? (Efa nofandrihako ho ahy sahady ny CanYouHearUs.US). Ny andalana ankafiziko avy amin'ireo doka lavabe ataon-dry zareo : “Raha eto an-toerana ihany isika, ny demaokrasia kosa manerantany. Aleo asehontsika azy ireo ny dikan'izany.”
Lawrence Lessig  dia olon'ny anjerimanontolo amerikàna, mpampanoa lalàna, ary mpikatroka politika. Navoaka tao amin'ny Medium ny dika iray amin'ity lahatsoratra ity . Ity navoaka etoan ity kosa dia nampiasàna ny lisansa Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)  .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/10/18/90212/
 Revolisionan'ny Vilany & Lapoaly: https://en.wikipedia.org/wiki/2009_Icelandic_financial_crisis_protests
 tantara ratsy avy amin'ny Taratasin'i Panamà: https://en.wikipedia.org/wiki/Panama_Papers
 nametraka fialàna ny Praiminisitra: http://www.nytimes.com/2016/04/06/world/europe/panama-papers-iceland.html?_r=0
 fanentanana iray tao amin'ny media sosialy: https://canyouhearus.is/
 Antoko Pirate: https://en.wikipedia.org/wiki/Pirate_Party_%28Iceland%29
 Maitso Ankavia: https://en.wikipedia.org/wiki/Left-Green_Movement
 Sosialy Demaokraty: https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Democratic_Party_%28Iceland%29
 Hoavy Mamiratra: https://en.wikipedia.org/wiki/Bright_Future_%28Iceland%29
 dika iray amin'ity lahatsoratra ity: https://medium.com/@lessig/a-letter-from-iceland-canyouhearus-is-789910d293c0#.ydpoy2o90